November 10, 2021 - ApannPyay Media
ယူနစ် ၁၀၀ သုံးစွဲရင် ကျပ် ၆၀၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်သာ ကုန်ကျမှာဖြစ်တယ်လို့ စစ်ကောင်စီ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ပြော
November 10, 2021 by ApannPyay Media
ယူနစ် ၁၀၀ သုံးစွဲရင် ကျပ် ၆၀၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်သာ ကုန်ကျမှာဖြစ်တယ်လို့ စစ်ကောင်စီ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ပြော ပြည်တွင်းမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ တရားမဝင် ရယူသုံးစွဲမှုတွေကို ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ စစ်ကောင်စီ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောပါတယ်။ (နိုဝင်ဘာ ၁၁ရက်)က ပဲခူးတိုင်း အင်းတကော် စက်မှုဇုန်နယ်မြေသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်မှာ ယခုလို ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ “လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေကို တရားမဝင်နည်းလမ်းများနဲ့ ရယူသုံးစွဲမှု မရှိစေရေး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ အခြေခံပြည်သူတွေ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲခများ သက်သာမှုရှိစေဖို့ စွမ်းအင်ချွေတာနိုင်တဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုနိုင်ရေး ပညာပေးခြင်းနဲ့ တိုက်တွန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။”လို့ ၎င်းက ပြောပါတယ်။ ယင်းအပြင် အာဆီယံနိုင်ငံများနဲ့ … Read more
ဆံပင်ကျွတ်တာ ဆံပင်မသန်တာတွေအတွက် ဒီလောက်ထိ ကောင်းလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိတာပါ
ဆံပင်ကျွတ်တာ ဆံပင်မသန်တာတွေအတွက် ဒီလောက်ထိ ကောင်းလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိတာပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသဘောအကျဆုံးကဆံပင်ပဲ။ fbကနေပဲဆေးနည်းတစ်ခုစမ်းလုပ်ကြည့်တာ(၂,၃)ကြိမ်လိမ်းကြည့်တာနဲ့သိသာလာတယ်။ ဆံပင်နှစ်ခွဖြစ်တာ,ဆံပင်တွေကျွတ်တာ,ဆံပင်မသန်တာတွေ,ခောင်းကအမာရွတ်ကဆံပင်ပြန်မပေါက်တာဆံပင်ပြန်ပေါက်ပြီးနက်မှောင်သန်စွမ်းအရှည်မြန်လာတကိုယ်တွေ့အသုံးပြုနေတဲ့ ဆေးနည်းလေးကိုချစ်သော`fri´တွေကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်….။ပထမဦးစွာ`ရှားစောင်းလက်ပတ်´၂ချပ်၃ချပ်လောက်ရှာပြီးဘေးအစွန်းနှစ်ဘက်လှီးဖြတ်ပြီးအနေတော်အတုံးလေးတုံးထားပါ။ အုန်းဆီစစ်စစ်(၁၀)သားကိုမီးဖိုပေါ်တင်အပူပေးပြီးစောစောကတုံးထားတဲ့ရှားစောင်းလက်ပတ်တုံးတွေထည့်ပြီးမွှေ(ကြော်) ရှားစောင်းလက်ပတ်ခပ်ဝါဝါအရောင်သို့ပြောင်းလာပြီဆိုရင်ဇကာနဲ့စစ် ဆီပဲယူထားပါ။ ကြက်သွန်ဥနီအနေတော်(၂)လုံးကိုထောင်း(သို့)Belender နဲ့ကြိတ်ပြီးရေစစ်အသေး(သို့)ပိတ်ဖြူစနဲ့အရည်ညှစ်ချကာခုနကအအေးခံထားတဲ့ဆီထဲကြက်သွန်ဥနီအရည်လောင်းထည့်ပါ။ ရေမချိုးခင် ဦးရေပြားကိုနှိပ်နှယ်ရင်းခပ်ရွှဲရွှဲလိမ်းပေးပါ။ မိနစ်(၂၀)လောက်ခဏထားပြီးခေါင်းလျှော်ချလိုက်ပါ။ ဆံပင်ခြောက်တာနဲ့ကိုယ့်ဆံပင်ကဆံသားပျော့အိအိအရသာလေးကိုကထူးခြားနေပါလိမ့်မယ်။ (၂)ခါ(၃)ခါလုပ်ကြည့်ရုံနဲ့ဆံပင်ထူထူသိပ်သိပ်ပြန်ဖြစ်လာပြီးဆံပင်ကျွတ်တာ,နှစ်ခွဖြစ်တာ,ထိပ်ပြောင်တာ,ဆံပင်ဖြူနေရာကပြန်မည်း(မဲ)လာတာတွေသိသာလာပါတယ်။ စမ်းပြီးလုပ်ကြည့်ပါနော်…အရမ်းကောင်းတာSabai Phyu ကိုယ်တွေ့လက်တွေ့မလို့ ချစ်မိတ်ဆွေများကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တာပါ…။အော်… အုံးဆီ(၁၀)သားကိုကြက်သွန်ဥနီ၂လုံးပဲနော်ဆီနဲ့ကြက်သွန်ဥနီဆတူမရောလိုက်နဲ့…အရည်များသွားရင်အနံ့စွဲပြီးရေသပ်သပ်ဆီသပ်သပ်ဖြစ်သွားတာကြောင့်အကောင်းဆုံးစမ်းသပ်ရောစပ်ပြီးမှသတိပေးရတာပါရှင်…. Credit ဆံပင္ကၽြတ္တာ ဆံပင္မသန္တာေတြအတြက္ ဒီေလာက္ထိ ေကာင္းလိမ့္မယ္လို့မထင္ခဲ့မိတာပါ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသေဘာအက်ဆုံးကဆံပင္ပဲ။ fbကေနပဲေဆးနည္းတစ္ခုစမ္းလုပ္ၾကည့္တာ(၂,၃)ႀကိမ္လိမ္းၾကည့္တာနဲ႔သိသာလာတယ္။ ဆံပင္ႏွစ္ခြျဖစ္တာ,ဆံပင္ေတြကၽြတ္တာ,ဆံပင္မသန္တာေတြ,ေခာင္းကအမာရြတ္ကဆံပင္ျပန္မေပါက္တာဆံပင္ျပန္ေပါက္ၿပီးနက္ေမွာင္သန္စြမ္းအရွည္ျမန္လာတကိုယ္ေတြ႕အသုံးျပဳေနတဲ့ ေဆးနည္းေလးကိုခ်စ္ေသာ`fri´ေတြကိုမၽွေဝေပးခ်င္ပါတယ္….။ပထမဦးစြာ`ရွားေစာင္းလက္ပတ္´၂ခ်ပ္၃ခ်ပ္ေလာက္ရွာၿပီးေဘးအစြန္းႏွစ္ဘက္လွီးျဖတ္ၿပီးအေနေတာ္အတုံးေလးတုံးထားပါ။ အုန္းဆီစစ္စစ္(၁၀)သားကိုမီးဖိုေပၚတင္အပူေပးၿပီးေစာေစာကတုံးထားတဲ့ရွားေစာင္းလက္ပတ္တုံးေတြထည့္ၿပီးေမႊ(ေၾကာ္) ရွားေစာင္းလက္ပတ္ခပ္ဝါဝါအေရာင္သို့ေျပာင္းလာၿပီဆိုရင္ဇကာနဲ႔စစ္ ဆီပဲယူထားပါ။ ၾကက္သြန္ဥနီအေနေတာ္(၂)လုံးကိုေထာင္း(သို့)Belender နဲ႔ႀကိတ္ၿပီးေရစစ္အေသး(သို့)ပိတ္ျဖဴစနဲ႔အရည္ညႇစ္ခ်ကာခုနကအေအးခံထားတဲ့ဆီထဲၾကက္သြန္ဥနီအရည္ေလာင္းထည့္ပါ။ ေရမခ်ိဳးခင္ ဦးေရျပားကိုႏွိပ္ႏွယ္ရင္းခပ္ရႊဲရႊဲလိမ္းေပးပါ။ မိနစ္(၂၀)ေလာက္ခဏထားၿပီးေခါင္းေလၽွာ္ခ်လိုက္ပါ။ ဆံပင္ေျခာက္တာနဲ႔ကိုယ့္ဆံပင္ကဆံသားေပ်ာ့အိအိအရသာေလးကိုကထူးျခားေနပါလိမ့္မယ္။ (၂)ခါ(၃)ခါလုပ္ၾကည့္႐ုံနဲ႔ဆံပင္ထူထူသိပ္သိပ္ျပန္ျဖစ္လာၿပီးဆံပင္ကၽြတ္တာ,ႏွစ္ခြျဖစ္တာ,ထိပ္ေျပာင္တာ,ဆံပင္ျဖဴေနရာကျပန္မည္း(မဲ)လာတာေတြသိသာလာပါတယ္။ စမ္းၿပီးလုပ္ၾကည့္ပါေနာ္…အရမ္းေကာင္းတာSabai Phyu ကိုယ္ေတြ႕လက္ေတြ႕မလို့ ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားကို ျပန္လည္မၽွေဝေပးလိုက္တာပါ…။ေအာ္… အုံးဆီ(၁၀)သားကိုၾကက္သြန္ဥနီ၂လုံးပဲေနာ္ဆီနဲ႔ၾကက္သြန္ဥနီဆတူမေရာလိုက္နဲ႔…အရည္မ်ားသြားရင္အနံ့စြဲၿပီးေရသပ္သပ္ဆီသပ္သပ္ျဖစ္သြားတာေၾကာင့္အေကာင္းဆုံးစမ္းသပ္ေရာစပ္ၿပီးမွသတိေပးရတာပါရွင္…. Credit
November 10, 2021 November 10, 2021 by ApannPyay Media
သွေးတိုးတတ်သူတွေ သိထားသင့်တဲ့ ဆယ်မိနစ်အတွင်း သွေးတိုးကျစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း ( ၅ ) ခု မကြာခဏ ခေါင်းကိုက် တတ် တယ် ၊ မောပန်း လွယ်တယ် ၊ ရင်ဘတ် အောင့်တတ် တယ် ဒါတွေ အပြင် သွေးတိုး တတ် တယ် ဆို ရင် အဲ့ဒါ တွေ ဟာ အိပ်ရေး ပျက်တာ များ လို့ ၊ စိတ် ဖိစီးမှု များ လို့ ၊ ကိုယ် အ လေးချိန် များ နေ လို့ စသဖြင့် ဖြစ် နိုင် ပါ တယ် ဘာကြောင့်ပဲဖြစ် ဖြစ် ကိုယ်တိုင် လည်း … Read more
ဘိုးဘိုးအောင် မသလို ၃ သိန်းရင်းပြီး သိန်း ၁၀၀ နီးပါးရတဲ့ အလုပ် ကျပ်ငွေ သုံးသိန်း ရင်းပြီး ၊ လ သုံးဆယ်နှင့် မေ့မေ့ ပျောက်ပျောက် ဝင်ငွေ သိန်းတစ်ရာ ရတဲ့ ပျိုးပင် လေးပါ။သူကတော့ မက္ကဒေးမီးယား လို့ခေါ်တဲ့ (MICADAMIAS) အခွံမာသီးအဖြစ် ချောကလက်ထဲ ထည့်စားတာတို့ ၊ အ ခြားနည်းပေါင်းများစွာ အသုံးပြုလို့ရတယ်လို့သိရတဲ့ အပင်မျိုးလေးပါ၊ ဒီမျိုးစေ့ကို တစ်စေ့ (၆ဝိ)ကျပ်ခန့်ဖြင့် မျိုးစေ့ ငါးထောင်ခန့်ကို (ကျပ် သုံးသိန်း ရင်းပြီး ) လွန်ခဲ့တဲ့ လပေါင်း သုံးဆယ်က လွယ်လွယ်ကူကူ ဝယ်ယူပျိုးထားလိုက် တာပျိုးပင် သုံးထောင့်ငါးရာခန့် အပင် ဖြစ်ထွန်းလို့ လူကြိုက်များတဲ့ ပျိုးပင်ကလေးတွေကို တစ်ပင် သုံးထောင်ခန့် လွယ်ကူစွာ … Read more
တန်ဆောင်မုန်းလအတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ တန်ဆောင်မုန်းလအတွက် တစ်လတာလုံး “ပန်းကန်ပြား တစ်ချပ်ပေါ်တွင် ငွေကျပ် ၁ဝဝတန်(သို့) ၁ဝဝဝကျပ်တန် တစ်ရွက်ကို ဖြန်ခင်းလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် ထိုပိုက်ဆံပေါ်တွင် ဖန်ခွက် ဖြစ်စေ ပန်းအိုးအသေးသာဖြစ်စေ တင်၍ ရေသန့်ဖြည့်၍ သပြေညွန့်(၅)ခက် ကို ဖန်ခွက်ထဲတွင် ထိုးလိုက်ပါ။ထိုနောက် ပန်းကန်ပြား၏ဘေးပတ်လည်တွေ ဆီ၊ဆား မပါဝင်သော လက်ဖက် အစိုများကို ဝိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ ခင်ဗျ။ ဤယတြာကို ဘုရားကျောင်းဆောင် ပေါ်သို့တင်၍မြတ်စွာဘုရားရှင်အား‌ လှူဒါန်းပေး‌ထားရပါမည်။ယခုလတစ်လတာတွင် #‌လိမ္မော်ရည်တစ်ခွက် စီကိုနေ့စဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်အားကပ်ပေးနေခြင်းဖြင့်လည်း မိမိအတွက်ထူးခြားမှူဖြစ်စဉ်များကောင်းကျိုးများစွာ ကို ရရှိခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ကံချေကန်တော့ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ဖို့ရန် မမေ့ပါနှင့်။နေ့စဉ်အောက်ဖော်ပြပါဂုဏ်တော်များကိုရွတ်ဖတ်ပါ။ ဣတိပိသောဘဂဝါ လောကဝိဒူ =၁၉ခေါက် ဣတိပိသောဘဂဝါ ဗု‌ဒ္ဓေါ =၆ခေါက် ဣတိပိသောဘဂဝါ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော =၁ရခေါက် တန်‌ဆောင်မုန်းလနေ့စဉ်လာဘ်ပွင့်အရပ်မျက်နှာများ တနင်္ဂနွေနေ့=မြောက်အရပ် တနင်္လာနေ့=တောင်အရပ် အင်္ဂါနေ့=အရှေ့အရပ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့=အ‌နောက်အရပ် … Read more
အမာရွတ်တွေပျောက်ပြီး အသားရည်ကြည်လင်စေမယ့် ဂျီးချွတ်ပေါင်းတင်နည်း
အမာရွတ်တွေပျောက်ပြီး အသားရည်ကြည်လင်စေမယ့် ဂျီးချွတ်ပေါင်းတင်နည်း အမာရွတ် တွေဟာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို အကျည်းတန် စေပါတယ် ။ ဒီလို အမာရွတ်တွေကို သက်သာ ပျောက်ကင်း စေတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ထဲမှာ ဂျီးချွတ်ခြင်း ဟာလည်း ထိရောက် တဲ့ နည်းလမ်းကောင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ ဂျီးချွတ် ခြင်းဖြင့် ဆဲလ်သေတွေ ကွာကျပြီး ဆဲလ်အသစ် ဖြစ်ပေါ်စေ တာကြောင့် အသားအရေကို စိုပြည်ပြီး ကြည်လင် ဝင်းပ နေစေပါတယ် ။ ခုဖော်ပြပေးမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ကတော့ အရမ်းကို လွယ်ကူ ရိုးရှင်းပြီး ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ပုံမှန်လေး ပြုလုပ် ပေးသွားရင် သိသာတဲ့ ရလဒ်ကို တွေ့မြင် ရမှာပါ ။ … Read more
နောက် (၂၄)နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းငယ်ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်ပြီး မိုးထစ်ချုန်းရွာသွန်းမည့် ဒေသများ
နောက်(၂၄)နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းငယ် (Depression)အဖြစ် ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မိုးထစ်ချုန်းရွာသွန်းမည့် ဒေသများ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၀)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် မိုးဇလ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း(Low Pressure Area)သည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းနှင့်ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ အဆိုပါလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် နောက်(၂၄)နာရီအတွင်းမုန်တိုင်းငယ်(Depression)အဖြစ် ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်ပြီး အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ(၁၁.၁၁.၂၀၂၁)ရက်နေ့၌ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊တမီးလ်နာဒူးမြောက်ပိုင်းကမ်းခြေအနီးသို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ မိုးဇလမှ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အဆိုပါ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းမုန်တိုင်းငယ်အရှိကြောင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် နေရာစိပ်စိပ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)တွင်နေရာကျဲကျဲနှင့် နေပြည်တော်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ရွာရန်ရာနှုန်း(၈၀)ဖြစ်ပါသည်။ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် တိမ်အသင့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းမည်ဟုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင်လှိုင်းအသင့်အတင့်ရှိပြီးလှိုင်းအမြင့်မှာမြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင် တို့တွင် (၄)ပေမှ (၈)ပေခန့်ရှိနိုင်ပါသည်။ နောက်(၂)ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်မှာ နေပြည်တော်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်တယ်လို့ မိုးဇလမှ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ … Read more
အမေ နံကရိုင်းမယ်တော် တကယ်ဝင်ပူးနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်
အမေ နံကရိုင်းမယ်တော် တကယ်ဝင်ပူးနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် မြင်ရခဲတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးပါနော်။ မျှဝေလိုက်ကြပါဦးနော်။ အားလုံးကပ်ကြီးသုံးပါးကျော်လွှားနိုင်ပြီး ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေနော်။ မြင်ရခဲတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးပါနော်။ မျှဝေလိုက်ကြပါဦးနော်။ အားလုံးကပ်ကြီးသုံးပါးကျော်လွှားနိုင်ပြီး ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေနော်။မြင်ရခဲတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးပါနော်။ မျှဝေလိုက်ကြပါဦးနော်။ အားလုံးကပ်ကြီးသုံးပါးကျော်လွှားနိုင်ပြီး ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေနော်။ မြင်ရခဲတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးပါနော်။ မျှဝေလိုက်ကြပါဦးနော်။ အားလုံးကပ်ကြီးသုံးပါးကျော်လွှားနိုင်ပြီး ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေနော်။မြင်ရခဲတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးပါနော်။ မျှဝေလိုက်ကြပါဦးနော်။ အားလုံးကပ်ကြီးသုံးပါးကျော်လွှားနိုင်ပြီး ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေနော်။မြင်ရခဲတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးပါနော်။ မျှဝေလိုက်ကြပါဦးနော်။ အားလုံးကပ်ကြီးသုံးပါးကျော်လွှားနိုင်ပြီး ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေနော်။ မြင်ရခဲတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးပါနော်။ မျှဝေလိုက်ကြပါဦးနော်။ အားလုံးကပ်ကြီးသုံးပါးကျော်လွှားနိုင်ပြီး ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေနော်။မြင်ရခဲတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးပါနော်။ မျှဝေလိုက်ကြပါဦးနော်။ အားလုံးကပ်ကြီးသုံးပါးကျော်လွှားနိုင်ပြီး ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေနော်။မြင်ရခဲတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးပါနော်။ မျှဝေလိုက်ကြပါဦးနော်။ အားလုံးကပ်ကြီးသုံးပါးကျော်လွှားနိုင်ပြီး ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေနော်။ မြင်ရခဲတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးပါနော်။ မျှဝေလိုက်ကြပါဦးနော်။ အားလုံးကပ်ကြီးသုံးပါးကျော်လွှားနိုင်ပြီး ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေနော်။ မြင်ရခဲတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးပါနော်။ မျှဝေလိုက်ကြပါဦးနော်။ အားလုံးကပ်ကြီးသုံးပါးကျော်လွှားနိုင်ပြီး ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေနော်။မြင်ရခဲတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်လေးပါနော်။ … Read more
ရှေးလူကြီးတွေ ပြောတဲ့ ”ဧည့်သည်လာရင် ဆန် မကုန်စေနဲ့”ဆိုတဲ့ စကားရဲ့ ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်
ရှေးလူကြီးတွေ ပြောတဲ့ ”ဧည့်သည်လာရင် ဆန် မကုန်စေနဲ့”ဆိုတဲ့ စကားရဲ့ ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ် လူကြီးတွေ ပြောတာ ကြားဖူးတယ်။ “ဧည့်သည်လာရင် ဆန် မကုန်စေနဲ့ကွတဲ့”။ငယ်ငယ်က ကြားဖူးတုန်းက ဘယ်နဲ့စကားကြီးပါလိမ့်ပေါ့။ စကားရိုးသလောက် အဓိပ္ပါယ်အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ သိ့၊မသိ့ ဧည့်သည်လာရင် ပုန်းနေပြီး ထမင်းချက်မကြွေးပဲ ရှောင်နေရမယ် ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အောင့်အီးပြီး ချက်ကြွေးရမယ်လို့လည်း ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး၊မကောင်းတတ်လို့ ချက်ကြွေးလိုက်ရတယ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ လက်ကချက်ကြွေးပြီး စိတ်က မပါတာမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊မျက်နှာလုပ်ပြီး ချက်ကြွေးရခြင်းမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီလိုတွေပဲ တွေးတွေး လုပ်လုပ်ပြီး ချက်ကြွေး နေကြရင် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ ဆန်ကုန်ကျိုးမရှိ ဖြစ်သွားပါပြီ။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ဆန်လေးနဲ့ အမျှော်မပါစေတနာသန့်သန့်လေး ချက်ကြွေးကြဖို့ရာ ပြောတာပါ။ အိမ်ရှင် ဘယ်လောက်အထိ့ စေတနာပါပါနဲ့ဧည့်ခံလိုက်တယ်ဆိုတာ ဧည့်သည်လုပ်ပြီး စားဖူးသူတိုင်း … Read more